लामो दौडका पाँच फुटबलर - Khelpati
बिहिवार, जेठ ८, २०७७ रमेश सुवेदी
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले सन् २०१५ मा पहिलो पटक साफ यू–१९ च्याम्पियनसिप आयोजना गरेको थियो ।
आयोजनाको जिम्मेवारी नेपालले पाएको थियो । नेपालले फाइनलमा भारतलाई पेनाल्टीमा ५-४ गोल अन्तरले पराजित गर्दै पहिलो संस्करणको उपाधि जितेको थियो ।
हाल राष्ट्रिय टिममा रहेका विमल घर्ति मगर, अनन्त तामाङ, तेज तामाङ, अन्जन विष्ट, सुनिल बल लगायतका खेलाडी रहेका उक्त टिमले उपाधि जित्दा नेपालमा तहल्का मच्चिएको थियो ।
यिनै खेलाडी रहेको टिमले एएफसी यू–१४ च्याम्पियनसिपमा इराक, जोर्डन जस्तो एसियाली ‘पावर हाउस’ टिमलाई नै पराजित गरेको थियो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को एकेडेमीबाट उत्पादित यस ‘ब्याच’ का खेलाडीबाट नेपालले धेरै आशा गरेको थियो । विमल, अन्जन र अनन्तले त युरोपमा गएर प्रशिक्षण समेत गरे ।
यस पछिका ब्याचबाट पनि केहि राम्रा खेलाडी आए । अर्पण कार्कीको कप्तानीमा रहेको यस ब्याचले भुटानमा भएको यू–१८ साफ च्याम्पियनसिप उपाधि पनि जित्यो । यस ब्याचबाट अभिषेक रिजाल र सुमन अर्यालमात्रै राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका छन् ।
यसरी उमेर समूहबाट आफुलाई प्रमाणित गर्दै राष्ट्रिय टिममा पर्न सफल केहि खेलाडीको चर्चा तल गरिएको छ ।
उनीहरुलाई नेपाली फुटबलमा लामो दौडका फुटबलरको रुपमा हेरिएको छ । अर्थात् उनीहरुबाट नेपालले उमेर समूहमा जस्तै उत्कृष्ट नतिजाको आशा राखेको छ ।
उनीहरु लामो समय राष्ट्रिय टिममा रहने विश्वास गरिएको छ ।
१ . अभिषेक रिजाल
राष्ट्रिय टिममा पछिल्लो पटक डेब्यु गर्ने खेलाडी हुन् अभिषेक रिजाल । एन्फा एकेडेमीका यी खेलाडीले गत वर्ष मलेसियाविरुद्ध डेब्यु गरेका थिए ।
डेब्युपछिको दोस्रो खेलमै चाईनिज ताईपेविरुद्ध गोल गरेपछि अभिषेकले आफुलाई राष्ट्रिय टिममा स्थापित गरिसकेका छन् ।
मिडफिल्डर तथा स्ट्राइकर दुबै भूमिकामा देखिने अभिषेकको खेलबाट प्रभावित भएका स्विडिस प्रशिक्षक जोहान कालिनले प्लेईङ सेटमा उनलाई स्थान दिदै आईरहेका छन् ।
राष्ट्रिय टिमबाट १ गोल गरिसकेका अभिषेक युवा पुस्ताका रुचार्एका खेलाडी समेत हुन् । अभिषेकले गत मंसिरमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपाललाई स्वर्ण पदक जिताउदा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । पछिल्लो प्रदर्शनले उनलाई लामो दौडमा रहेका खेलाडीको रुपमा हेरिएको छ ।
२. रवि पासवान
फुटबलका हस्तिहरु आधुनिक फुटबललाई फिटनेशको खेल समेत भन्न रुचाउँछन् । जस्ले ९० मिनेटसम्म मैदानमा आफ्नो शतप्रतिशत फिटनेश देखाउँछ उनै राम्रो फुटबल खेलाडी ठहरिन्छ ।
नेपाली फुटबलमा पनि फिटनेशको पक्का खेलाडी हुन्, रवि पासवान । यी खेलाडीले न त नेपालको उमेर समूहमा नै मौका पाए न त एन्फा एकेडेमीको अनुभवनै । यी मिडफिल्डर खेलाडी मोफसलको प्रतियोगिताबाट आएका खेलाडी हुन् ।
पछिल्लो समय नेपाली फुटबलरलाई शतप्रतिशत फिटनेश दिन सक्दैनन् भन्ने आरोप छ । तर, त्यसलाई रविले गलत सावित गरिदिएका छन् ।
मुख्य प्रशिक्षकमा जोहान कालिन आएपछि खेलिएका ११ खेल मध्ये ९ खेलमा रविले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
पछिल्लो पुस्ताका प्रेरणाको स्रोत बनेका रविले राष्ट्रिय टिमबाट ९ खेल खेलिसक्दा ८ खेलमा प्लेईङ सेटमा रहेर खेलेका छन् ।
७५ साल चैतमा कुवेत भ्रमणमा डेब्यु गरेपछि रविले पछाडी फर्केन हेर्नुपरेको छैन । रविको फिटनेश र दौडको स्पिडको कारण उनलाई लामो समय नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीको रुपमा हेरिएको छ ।
३. अन्जन बिष्ट
अन्जनले राष्ट्रिय टिमको ६ वर्षे यात्रामा २ गोल गरेका छन् । जुन अहिले निकैनै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकपको छनोट अन्तर्गत चाईनिज ताईपेविरुद्ध अन्जनले दुई गोल गरेका थिए । उमेर समूहबाट नै नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका मिडफिल्डर अन्जनले युरोपमा समेत प्रशिक्षण गरेका छन् ।
होचा कदका अन्जनले आफुलाई राष्ट्रिय टिममा स्थापित गरिसकेका छन् । लामा प्रहार गर्न खप्पिस अन्जन मिडफिल्डर र स्ट्राइकर दुबै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
सन् २०१४ फिलिपिन्ससँगको खेलमा डेब्यु गरेका अन्जन त्यसयता भने निरन्तर टिममा छन् । अन्जन उमेर समूहको साफ यू-१९ सँगै बंगबन्धु गोल्डकप, सोलिडारीटी कप र १२ औं सागको उपाधि नेपालले प्राप्त गर्दा टिमका सदस्य थिए ।
अनन्त नेपाली राष्ट्रिय टोलीको भरपर्दो डिफेन्डर हुन् । उनी पछिल्लो पुस्ताबाट राष्ट्रिय टिमको सेन्टर डिफेन्डरमा स्थापित गर्ने एक्ला खेलाडी समेत हुन् ।
अनन्त नेपालले एएफसी सोलिडारीटी कप, बंगबन्धु गोल्डकप तथा १२ औं र १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण जित्दाका महत्वपूर्ण सदस्य हुन् ।
सन् २०१५ बाट राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरेका अनन्त त्यसपछि लगातार टिममा छन् ।
अनुशासन र आफ्नो खेल कौशलमा प्रभावकारी देखिएका अनन्तले लामो समय टिममा आफुलाई स्थापित गराउने अनुमान गरिएको छ ।
५. विमल घर्तिमगर
स्ट्राइकर विमल सानै उमेरमा सफलताको शिखरमा पुगेका खेलाडीमा पर्छन ।
उमेर समुहमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि विमलले १४ वर्षकै उमेरमै राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यु गर्ने अवसर पाएका थिए ।
उमेर समूहको यू–१४, १६ र १९ मा आफुलाई प्रमाणित गरेका विमलले सन् २०१३ को साफ च्याम्पियनसिपमा पाकिस्तानविरुद्ध गोल गर्दै आफुलाई अब्बल स्ट्राइकर भएको प्रमाणित गरेका थिए ।
विमलले युरोपका क्लबमा प्रशिक्षण गर्नुका साथै भारतीय आई लिग क्लब र माल्दिभ्सको शीर्ष श्रेणीको लिग खेलिसकेका छन् ।
नेपालले बंगबन्धु गोल्डकप, एएफसी सोलिडारीटी तथा १२ औं सागको उपाधि जित्दा विमल टिममा रहेका थिए । तर, पछिल्लो समय भने विमलको खेल केहि खस्किएको छ । यस्तै उनी पटक पटक अनुशासनको कारबाहीमा पर्दै आएका छन् ।
सन् २०१२ मा बंगलादेशविरुद्ध डेब्यु गरेका विमलले हालसम्म ८ गोल गरिसकेका छन् । हरि खड्का र निराजन रायमाझिको नाममा रहेको १३ गोलको कीर्तिमान विमलले तोड्ने अनुमान गरिएको छ ।